Inqubekela phambili Yomuntu kanye neDell Technology World | Martech Zone
ISonto, May 13, 2018 Douglas Karr
Uma ngabe ubunake ubuchwepheshe kuphela ngemithombo yezindaba ejwayelekile, ungacabanga ukuthi izimoto ezizimele zibulala abantu, amarobhothi athatha imisebenzi yethu, futhi ubuchwepheshe busiholela ekubhujisweni. Njengabamakethi, ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi singagcini ngokunaka uhlelo lokusebenza lombulali olulandelayo laphaya, kumele sibheke ukuthi ubuchwepheshe buyithinta kanjani impilo nokuziphatha kwabathengi namabhizinisi.
Amaqiniso mayelana ukuguqulwa kwedijithali ziphambene impela.
Ake siqale ngezimoto ezizimele. Abantu bayaqhubeka nokuba nezingozi ezibulalayo zezimoto, kubulala abantu baseMelika abalinganiselwa ku-3,287 XNUMX nsuku zonke. Izimoto ezihlakaniphile azibulali… zizosindisa izimpilo. Eqinisweni, ngilinganisela ukuthi sezivele zinjalo. Ngisendleleni ebheke eDell Tech World eLas Vegas, ngibhale inothi emgwaqweni ngichaza ezinye ze izici zeChrysler Pacifica entsha Ngangiqashe. Angingabazi ukuthi imisebenzi yokuzimela yaleyo moto yehlise ubungozi bami bokungena ezingozini kulo lonke uhambo lwami lwamamayela angu-5,000 XNUMX.
Ukuthatha imisebenzi? Ngenkathi konke ukuthuthuka kwezobuchwepheshe kususa isidingo semisebenzi ethile, imisebenzi emisha ilapha. Eminyakeni engamashumi amathathu edlule, akekho noyedwa owacabanga (kufaka nami uqobo) ukuthi ngizoba ne-ejensi yedijithali futhi ngikhiphe ama-podcast enkampani eyaqala ngokuthengisa amakhompyutha enziwe ekhaya egalaji. Nginezinkulungwane zozakwethu abakhokhelwa kahle ngemisebenzi engakaze ibe khona emashumini ambalwa edlule.
Ngingahle ngibe yingcosana uma kukhulunywa nge-automation. Ngingumuntu ongenathemba okholelwa ukuthi i-automation ayenzi imisebenzi; isusa imigoqo kokuningi. Njengengxenye yale sizini ye- Izinkanyiso i-podcast, sixoxisane nomsunguli we I-DAQRI, inkampani engokoqobo engathandwa kwabathelisi esikubona ehlanganise isoftware ne-hardware ohlelweni olubizwa nge-Workenseense.
Hlanganisa isisebenzi esinamakhono nesikhulumi se-AR njenge-DAQRI esingaveza amanothi, imiyalo, futhi sikuxhumanise nochwepheshe ngesikhathi sangempela… nokuthi isisebenzi singakwazi ukwenza ukunakekelwa kokulungisa nokulungisa okokusebenza okungenzeka ukuthi abanawo ngisho nokuqeqeshwa . Ngakho-ke, lokho kungandisa amathuba ethu omsebenzi, hhayi ukuwafaka esikhundleni.
Ubuchwepheshe buya buhlala busebenza kahle futhi. Isitoreji esandisiwe, amandla ekhompyutha, kanye namazinga wokudluliswa kwedatha anamaphrofayili kagesi ancishiswe kakhulu ayasiza ukunciphisa amandla kuyunithi ngalinye lomsebenzi, hhayi ukulinyusa. Futhi kuyasisiza ukuguqula izimboni zendabuko ebesingacabangi ukuthi zingaphinde zakhiwe. Ama-aerofarm, ngokwesibonelo, kwandisa isivuno samapulazi ngama-390% ngokuwahambisa endlini, ukulungisa ukukhanya okungabizi, okungabizi kakhulu okulungiselelwe isitshalo ngasinye nokunciphisa isidingo samanzi ngama-95%. Ukulima ngaphakathi kungenza ukudla okunomsoco kutholakale futhi kutholakale kuwo wonke umuntu emhlabeni.
Ngiyaqhubeka nokuxwayisa amaklayenti ami ukuthi sisesigabeni esisha soguquko lobuchwepheshe. Amandla wekhompiyutha angahlukaniseki, ukuxhumana okungenawaya ngejubane elikhulu, kanye nokugcina okungenamkhawulo kuvula isango lokuya kulo ukuhlakanipha okungekhona okwangempela, ukufunda okujulile, ukufunda ngomshini, ukucubungula ulimi lwemvelo, kanye ne- Inthanethi Things.
Akuthengisiwe okwamanje? IGoogle isanda kukhipha idemo yayo ye- Umsizi we-Google lokho kufanele kushintshe umqondo wakho. Umsizi we-Google useqophelweni eliphambili - eyalela idivayisi yakho ye-IoT ukuthi ikwenzele i-aphoyintimenti. Ukudideka kwale ntuthuko kungangcwaba ngokoqobo izimbangi zeGoogle ezifana ne-Apple ne-Amazon uma zingakwazi ukuqhubeka. Yize lokho kungeke kuzwakale kunengqondo, khumbula ukuthi abantu abakaze bacabange ukuthi iNokia neBlackberry bazolahlekelwa ukubusa kwabo, noma.
Izifundo azikho ezinkampanini zobuchwepheshe nje, yisifundo sayo yonke inkampani. Yonke imikhiqizo nezinsizakalo emhlabeni zingathuthukiswa noma zithathelwe indawo ubuchwepheshe be-theses. Yonke inkampani ingadala ukuxhumana nomthengi obekungabikho ngaphambili. Uhlelo lwasekhaya lwe-HVAC luthathelwa indawo ngesonto elizayo ngohlelo olusha, olusebenza kahle.
Ngenkathi ngilangazelela ikhaya elipholile kanye nomthethosivivinywa ophansi wamandla, intuthuko enkulu ukuthi inkampani ifaka i-thermostat nohlelo lokuqapha oluhlelwayo. Uhlelo luza newaranti yeminyaka eyi-10… futhi uhlelo lokuqapha luzokwazisa inkampani yami ye-HVAC uma kunezinkinga ezithile. Le nkampani yesevisi manje inexhumano oluqondile lweminyaka eyi-10 kumakhasimende ayo ngale nkundla - ngaphandle kwesidingo seplatifomu yomuntu wesithathu ukungi-spam. Lolu uhlelo oluhle kakhulu lokugcinwa kwamakhasimende, njalo. Futhi, njengomthengi, ngiyakwamukela ukuxhumana!
Kubalulekile ukuthi inkampani yakho iqale ukucabanga ukuthi ungayisebenzisa kanjani futhi uyiphathe kanjani imboni yakho ngaphambi kokuba inkampani yakho iphele ize ibonakale.